Kamakura, kuenda kuJapan | Kufamba Nhau
Kamakura, kuenda kuJapan
Mariela Carril | | Japan, Chii chekuona
Kamakura ndeimwe yeanowanzoitika mafaro anogona kuitwa kubva kuTokyo, Guta guru reJapan. Dai nyika yanga isiri kuenda nedenda iri, 2020 ingadai yakave iri yepamusoro mwaka wekuJapan wekushanya, nemaOlimpiki uye ese, saka inyika yakashanyirwa kwazvo.
Kune akawanda mafambiro akareruka ekuita kubva kuTokyo neKamakura iri pasi peawa imwe kumaodzanyemba kweguta. Super padyo uye yakakurudzirwa kwazvo, nekuti mukuwedzera, iyo inozivikanwa Kamakura Buddha urikuonei pamufananidzo.
Ndicho guta regungwa inova awa yekumaodzanyemba kubva kuTokyo. Pane imwe nguva yaive nzvimbo yezvematongerwo enyika yenyika, kumashure muzana ramakore rechiXNUMX, hurumende yakagara zana rese pasi pekutonga kweMinamoto shogun neveHojo regents. Gare gare simba rakapfuura kuenda kuguta reKyoto, apo mutsivi wezvematongerwo enyika paakasarudza kugara ipapo.
Nhasi ingori a runyararo guta diki rine akawanda matemberi, enhoroondo zviyeuchidzo, uye tembere. Uye sezvo iri pamhenderekedzo, ine mahombekombe ayo anowanzo kuve akazara kwazvo muzhizha. Nzira yekuenda sei kuKamakura?
Nechitima pane zvitatu zvingasarudzwa. Unogona kutora iyo Mutsara weOdakyu inova ndiyo yakachipa panzira. Unotenga Enoshima Kamakura Mahara Pass uye izvo zvinosanganisira rwendo rwakatenderera pakati peShinjuku muTokyo neKamakura. Uye zvakare, inosanganisira iko kushandiswa kweEnoden, chimwe chitima asi chemagetsi, che chete 1520 yen. Nenzira iyi yekufambisa zvinotora maminetsi makumi mapfumbamwe kuti usvike, saka kana iwe uchida kutora nguva shoma iwe unofanirwa kushandisa iyo JR mutsara.
JR ine iyo Shonan Shinjuku Mutsetse, iyo inobatanidza Shinjuku naKamakura muawa imwe chete uye inodhura 940 yen. Zviri nyore kumirira chitima kuenda kuZushi, inova ndiyo inomira paKamakura chiteshi (mbiri kuenda paawa), zvikasadaro unofanirwa kuchinja pachiteshi cheOfuna. Mumwe mutsara ndiyo JR Yokosuka Mutsara ichibatanidza Tokyo chiteshi naKamakura. Rwendo rwunotora isingasviki awa uye inodhura 940 yen.
Iyo zoni ine maviri anopfuura: iyo Enoshima Kamakura Yemahara Pass, pa 1520 yen, inosanganisira rwendo rwekudzoka Shinjuku / Kamakura nekushandisa iyo Enoden; uye iyo Hakone Kamakura Pass, ye7000 yen), iyo inobvumidza kushandiswa kweEnoden neOdayu mutsara, asiwo kutakura kwakatenderedza Hakone pamazuva matatu akateedzana.
Chii chandinoshanyira muKamakura? Zvinonyanya kushanya zveKamakura zvinogoverwa munzvimbo nhatu padyo nezviteshi: padyo neKita Kamakura Station, Kamakura Station neHase Station. Guta diki rakadii chaizvo unogona kufamba netsoka kana, kune chimwe chinhu chinoyevedza, kurenda bhasikoro. Kune zvakare mabhazi nematekisi, kana iwe uchida kusvika kune dzimwe nzvimbo dziri kure.
Kushanya kwedu kwekutanga kuri Kamakura Mukuru Buddha, Kamakura Daibutsu. Icho chifananidzo chendarira chaAmida Buddha chiri muchivanze cheKotokuin Tembere. Iyo inomira ingangoita gumi nerimwe nehafu metres kureba uye ndiyo yechipiri pakureba bronze Buddha chifananidzo munyika. Yakatanga kubva muna 1252 uye pakutanga yaive mukati meiyo hombe hombe yetembere, asi nzvimbo yacho yakatambura madutu akati wandei muzana regumi nemana nemana nemana nemakumi mashanu ezera saka yakazofungwa kuti iiswe panze chaipo.
Kamakura's Great Buddha ingori maminetsi gumi kana mashoma kubva kuHase Station, chiteshi chechitatu paEnoden Line kubva kuKamakura. Enoden Terminal Station iri padyo neJR Kamakura Station uye ichi chidiki chemagetsi chitima chinobatanidza Kamakura neEnoshima neFujisawa. Iyo Buddha yakavharwa kusvika Chikumi nekuda kwekonavirus uye nhasi yakavhurika asi maawa ayo aderedzwa: kubva na10am kusvika na8 pm. Kupinda ingori yen 300 chete, ingori pasi pe $ 3.
El Hokokuji Tembere idiki, yakanaka, uye yakati kurei. Icho chiri cheboka reRinzai reZen Buddhism uye yakavambwa munguva yekutanga kwaMuromachi, iri tembere yemhuri yemhuri yeAshikaga. Zvinoonekwa patinokwira chikomo, tichipfuura nepabharaki uye nebindu diki kudzamara tasvika kuimba hombe yakavakwazve mukutanga kwezana ramakumi maviri mushure mekudengenyeka kwenyika kukuru kweGreat Kanto muna 1923.
Chiumbwa chakakosha kwazvo mutembere ndecheya Buddha, asi kune zvakare diki bhero shongwe uye hupfumi hukuru pane zvese: yakanaka shoma bindu remishenjere iri kuseri kweimba huru. Kune akafanana 2000 bamboo uye dzakamanikana nzira dzekufamba pakati, a teyi kupi kwekunwa matcha tii (girini tii), uchifunga nezve runako urwu. Kune mamwe zvakare mapako anoita kunge anobata madota evamwe madzishe edzinza reAshikaga.
Unosvika sei kuHokokuji Tembere? Kufamba kubva paJomyoji bus stop (izvi zvinotorwa paKamakura chiteshi, maminetsi gumi pa10 yen). Unogona kutora 200, 23 kana 24. Kana iwe uchida kufamba, iwe uchasvika netsoka muhafu yeawa kana zvishoma zvishoma kubva pachiteshi chimwe chechitima. Iyo Bamboo Bindu rinovhura kubva 36am kusvika 9 pm uye inovhara kubva Zvita 4 kusvika Ndira 29. Zvinotora mazana mazana matatu uye kana iwe uchida iyo tii sevhisi iwe unobhadhara yakawedzera mazana matanhatu yen.
Imwe tembere ndiyo Hase Tembere, veboka reJodo uye vane mukurumbira kwazvo pakukwirira kwaro Chifananidzo chine gumi nerimwe chine musoro weKannnon, mwarikadzi wengoni. Imba yacho ingangoita gumi metres kumusoro uye chifananidzo chakagadzirwa nematanda akavezwa, imwe yeakakura kwazvo erudzi rwayo muJapan. Nhoroondo yacho ndeyekuti huni iyi ndiyo imwechete yaishandiswa kuveza chifananidzo chaKannon weNara. Iyo tembere ine miziyamu, iyo inobhadhara imwe yekupinda, iyo inochengeta zvimwe zvidhori, mifananidzo uye zvimwe Kune rimwe divi kune Amida-do Hall ine gumi-tsoka tsoka yegoridhe yeAmida Buddha.
Tembere, nekuti iri padivi pegomo, ine yakanaka tara kubva uko maonero eguta reKamakura akanaka. Kune zvakare nzvimbo yekudyira yekunakirwa zvakanyarara uye iwe uchaona, padyo nematanho anokwira nekudzika padanho, mazana ezvidhori zvidiki zveJizo Bodhisattva, uyo anobatsira mweya yevana kusvika paradhiso.
Pazasi chaipo penzvimbo yekuyera ndipo panopinda patemberi, iine mapindu nemadziva. Hasedera ingori maminetsi mashanu kubva kuHase Station. Inovhura kubva 8 am kusvika 5:30 pm uye kusvika 5 am pakati paGumiguru naFebruary. Iyo haina kuvhara chero zuva uye iyo yekupinda inodhura mazana mana yen.
Iyo yakakosha tembere muKamakura ndeye Tsurugaoka Hachimangu. Iyo yakavambwa muna 1603 uye yakatsaurirwa kuna Hachiman, mwari anodzivirira wemhuri yeMinamoto uye samamura mune vese. Iyo tembere inowanikwa neyakareba nzira inoenda kubva kuKamakura boardwalk, kuyambuka guta rese nekuyambuka pasi pematanho akati wandei. Iyo huru imba iri padhorobha pamusoro pechikwiriso. Mukati mune miziyamu ine mapakatwa, zvinyorwa, masiki ...
Kurudyi kwesitepisi, kusvika gore ra2010, paive nemuti weginko uyo pane imwe nguva wakashanda senzvimbo yekuhwanda kurwisa shogun. Yakare, yakaisvonaka goridhe mukudonha, haina kupona dutu munaKurume 2010 ndokufa.
Pazasi pematanho pane nhanho uko kunowanzo kuve nemimhanzi nekutamba mashoo uye iwe unogona kuona imwe nzvimbo inoyerera uye zvivakwa zvekunze zvakapoteredza ipapo. Iwe unogona zvakare kusvika kutembere iyi kubva kuKamakura Station, kungave nebhazi kana netsoka. Kupinda kuri mahara.
Hatigone kutsanangura huwandu hwetemberi anaKamakura asi tinogona kuvatumidza mazita: Kenchoji, Zeniarai, Engakuji, Meigetsuin, Ankokuronji, Jomyoji, Zuisenji, Myohonji, Jochiji, Tokeiji naJufukuji. Dzese dzakanaka asi ichokwadi kuti haugone kuchipedza uchiona tembere, kechitatu kechakafanana. Zvatinokurudzira ndezvekuti shanyira Enoshima nemhenderekedzo dzayo uye ita imwe kufamba.
Enoshima chitsuwa chidiki padyo neTokyo iyo yakabatana nemhenderekedzo nebhiriji raunoyambuka netsoka. Chitsuwa chine nzvimbo tsvene, shongwe yekucherechedza, mapako uye mapindu. Chikomo chine miti chinogona kuongororwa netsoka uye iwe uchaona nzvimbo dzinoyera dzakatsaurirwa kuna Benten, mwarikadzi werombo rakanaka, hutano nemumhanzi.
Kune zvakare aquarium uye mahombekombe akanaka, ane inodziya, akadzikama mvura uye crabbing! Kubva kuKamakura iyo Enoden inotora maminetsi makumi maviri nemashanu, kubva kuShinjuku iwe unogona zvakare kusvika ipapo uye zvakafanana kubva kuchiteshi cheTokyo.
Pakupedzisira, Kana iwe uchida kukwira makomo muKamakura pane nzira nhatu: iyo Daibutsu Tour, iyo Tenen Tour uye iyo Gionyama Tour, nhasi yakavharwa nekuda kwedutu regore rapfuura. Kana iwe ukaenda gore rinouya, edza kutarisa kuti ndeapi akavhurika. Idzo dzakanakisa, nzira dzakasvibira dzinoyambuka makomo achibatanidza tembere nenzvimbo dzinoyera. Kazhinji, hazvigare inopfuura hafu yeawa kusvika pamaminitsi makumi mapfumbamwe, asi hazvina kugadzirwa saka chenjerera shangu nemvura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Kamakura, kuenda kuJapan